Fonenana ao Kildare
Manomboka amin'ny rendrarendra kintana 5 ka hatramin'ny fandraisana tsara ao an-toerana an'ny B & B na ny fahaleovan-tena amin'ny fikolokoloana tena, Kildare dia manana safidy hipetrahana mifanaraka amin'ny tsiro sy teti-bola rehetra.
Aorian'ny andro iray be atao amin'ny famoahana ireo angano sy angano momba ireo vakoka lovan'i Kildare, na ny fientanentanan'ny andro iray any amin'ireo hazakazaka, na mandihy alina tsy miverina amin'ny fotoam-pivavahana mozika nentim-paharazana, mila fitsaharana amin'ny alina ianao. Ka aiza no tianao hametrahana ny lohanao, hatory tsara ary manomboka ny ampitso ny dia ataonao amin'ny fialantsasatrao? Manana ny karazan-trano rehetra any Kildare ianao mba hisafidiananao azy!
Castles & Trano manan-tantara
Sariaka amin'ny biby
Fanandramana fankalazana 5 tsy azo nolavina tao amin'ny Hotely Kildare